Olana goavana ny fako plastika ao Oganda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, русский, Ελληνικά, Swahili, Español, عربي, ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, 日本語, 繁體中文, English
Sary iray mampiseho ny loto sy ny fako plastika any ambanivohitr'i Kampala. Sary avy amin'i Enno Schröder. CC BY 2.0
Nankalazaina tamin'ny 5 jona ny Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany, toy ny fanao isan-taona hatramin'ny taona 1974. “Reseo ny fandotoana Plastika” no lohahevitry ny taona 2018 – antso manokana hanaovana hetsika any Oganda, izay mahazatra loatra ny olona ny manary ny tavoahangy sy ny harona plastika eny an-dalambe.
Manentsina ny fantsona fandehanan'ny rano, mampitombo ny tondra-drano an-tanàndehibe ny fako plastika, ary miafara any anaty farihy sy ny ranomasimbe izany ary hohanin'ireo trondro ka mampidi-doza ny fahasalaman'ireo zava-mananaina an-dranomasina sy ho an'ny olombelona. Any amin'ny faritra ambanivohitra, maro amin'ireo plastika no miafara any amin'ny toeram-pambolena sy ny zaridaina ka miantraika amin'ny fambolena satria manakana ny fidiran'ny rano sy ny rivotra izy ireo.
Noezahana norarana ny harona plastika (fantatra amin'ny anarana kaveera) tao Ogandà, saingy tsy nahomby ny fampiharana ity fandrarana ity noho ny tsindrin'ny mpanamboatra, ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny mpanao politika ary ny tsy fisian'ny fanentanana momba ny filàna izany.
Nanao famintinana tao amin'ny tranonkala Earth Finds Uganda, ilay mpanoratra Baz Waiswa tamin'ny taona 2016 :
Saingy tamin'ny volana Aprily 2015, na dia teo aza ny fihetsiketsehana fanehoan-kery marobe nataon'ny mpikambana avy amin'ny sehatra miahy tena, anisan'izany ny ady ara-pitsarana dia nametraka ny fandraràna ny fanafarana, ny famokarana ary ny fampiasana ny harona vita amin'ny polyéthylène mirefy latsaky ny 30 microns ny Minisiteran'ny Rano sy ny Tontolo Iainana teo ambany fahefan'ny Manampahefana Tomponandraikitra momba ny Tontolo Iainana (NEMA).
Tsy nahafinaritra anefa ny fampiharana raha niady tamin'ny fanakanana ary nangataka ny fampiatoana izany ireo orinasa voakasik'izany sy ny sampandraharaham-panjakana hafa anisan'izany ny kabinetra. Nametraka ny vahoaka tao anatin'ny fisalasalana ity fiovaovan-kevitra ity. Tsy nampiasa intsony ny kaveera tamin'ny famonosana ny entan'ny mpanjifany ny mpivarotra sasany raha nanohy nampiasa ilay vokatra voarara kosa ny hafa na dia nisy aza ny fandrahonana avy amin'ny NEMA fa hohenjehin'ny lalàna izay manao izany.
Tamin'ity taona ity, nandritra ny Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany, nanome baiko ireo orinasa mpamboatra harona plastika miisa 45 ny Filoha Yoweri Museveni mba hampitsahatra ny fanamboarana ny harona polyéthylène, mbola nanao ezaka hatrany izy mba hanamafisana ny fandraràna. Mbola ho hita eo raha toa ka handaitra izany amin'ity indray mitoraka ity.
Mety hanakana ny fikorianan'ny rano maloto ny fako plastika ao Kampala, renivohitr'i Oganda sady tanàna lehibe indrindra. Nanao ezaka tamin'ny fanomezana fanariam-pako teny an-dalambe ny Manampahefanan'ny Renivohitra Kampala (KCCA), nanao fanangonana fako matetika, ary nandrisika ny fanodinana ny plastika tamin'ny alalan'ny fanasoniavana ny fifanarahana tamin'ny Coca Cola mba hampitomboana ny vola azon'ny olona amin'ny fanangonana fako plastika, ho 0,05$ hatramin'ny 0,13$ isan-kilaograma.
Nanao ezaka ihany koa ny tsirairay mba handresena ny fako plastika. Ohatra, tamin'ny taona 2017 nampiseho ny tanora mpandraharaha roa izay nanangona fitaovana plastika ary namadika izany ho biriky fananganan-trano ny CGTN Africa .
Tamin'ity taona ity, nitsidika sekoly samihafa tany atsinanan'i Oganda ny vondrona mpiaro ny tontolo iainana Little Hands Go Green nandritra ny Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany mba hampianatra ireo ankizy ny loza ateraky ny fampiasana ny harona plastika:
The best way to drive communication on importance of ridding polythene bags ‘kaveera'from our community. @LilGreenHandsUg@nemaug@NFAUG@JosephMasembe1@Samsemah1@WanjohiColetta@_AfricanUnion@ESusWatch@Twaweza_NiSisipic.twitter.com/AGz3Ha4JG0
Ny fomba tsara indrindra amin'ny fampahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fanafoanana ny harona polyéthylène ‘kaveera’ ao amin'ny fiarahamonintsika.
Nisioka tamin'ny alàlan'ny tenirohy #BeatPlasticPollution ihany koa ny tale jeneralin'ny Little Hands Go Green, ary nandrisika ireo mpandeha mba handamina tsara ny tavoahangy plastika avy nisotroiny :
You can do the same …its a habit of travellers to litter along as they travel .Keep your trash and dump when you get to your destination .#BeatPlasticPollution#GogreenUg#Wed2018Ug@nemaug@NFAUG@nwscug@LilGreenHandsUgpic.twitter.com/rto5ICUjCS
Afaka manao toy izany ihany koa ianao … fahazarana ho an'ny mpandeha ny manary fako eny an-dalana rehefa mandeha izy ireo. Tazony ny fakonao ary ario izany rehefa tonga any amin'ny toerana alehanao ianao
Tsy ny plastika ihany no fototry ny olana ho an'ny tontolo iainana ao amin'ny firenena. Ny fitrandrahana fasika manamorona ny Farihin'i Victoria ohatra dia mampidi-doza ny zava-mananaina anaty rano satria mampiasa ny fasika ho toeram-ponenany sy ho toeram-panatodizany ny trondro . Mitahiry ny rano ihany koa ny tany mando ary miady amin'ny tondradrano. Mbola maro ny asa miandry an'i Oganda amin'ny fiarovana ny tontolo iainana maharitra sy mahasalama ho an'ny olom-pireneny rehetra.